Dib u celinta Afqaaniyiinta oo halkeedi ka socon doonta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mudaharaadka suuqa Mynttorget ee magaalada Stockholm. sawir: Christine Olsson/TT
Dib u celinta Afqaaniyiinta oo halkeedi ka socon doonta
Mudaharaadka suuqa Mynttorget
La daabacay onsdag 16 augusti 2017 kl 11.58
Dawladda ayaa sheegtay in aaney surtogal ahin in la joojiyo dib u celinta Afqaaniyiinta.
Sidaa aanu hore idinla socodsiinay ayey beryahaan boqolaal dhalaan oo ka yimid dalka Afqaanistaan ku mudaharaadayeen badhtamaha suuqa Mynttoret ee magaalada Stockholm si loo joojiyo dib u celinta Afqaaniyiinta.
Hasayeeshe ayey Helene Fritzon wasiirada socdaalka saaka ka sheegtay barnaamijka P1 morgon in aaney macquul ahin in la joojiyo dib u celintan.
-Qof kasta oo sharci ka dalbada dalkan waxaa la marsiiya sharciga u yaala Iswiidhan. Go´aanka in uu qofkaasii joogayo amba waddankiisa lagu celinayo waxaa iska leh heeyada socdaalka ee Migrationsverket, ayey sheegtay Helene Fritzon wasiirada cusub ee socdaalka.
Fatemeh Khavari oo ka hawlgasha ururka ”Ung i Sverige” ayaa ka mid ah dadka ka qeeyb galay mudaharaadkan. Wexeey sheegtay in aaney qeeybsaneeyn fikirka wasiirada socdaalka madama amniga dalkan hoos u degay beryihii ugu dambeeyay. Sidaas daraadeed ayey dawladda kula tallinaysa in la joojiyo dib u celinta Afqaaniyiinta, ayey sheegtay
2015 ayey tiro gaadhsiisan 40.000 caruuro,kelinimo ku yimid dalkan, sharci codsadeen . Boqolkii ba 45 ka mid ah kuwan ayaa la siiyay sharci.